Hello Nepal News » १६ वर्षपछि रामोस रियल मड्रिड छाड्ने नजिक : नयाँ गन्तव्य कता ?
१६ वर्षपछि रामोस रियल मड्रिड छाड्ने नजिक : नयाँ गन्तव्य कता ?
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका कप्तान तथा प्रमुख डिफेन्डर सर्जियो रामोसले क्लब छाड्ने सम्भावना बढेको छ । सन् २००५ देखि रियलबाट खेल्दै आएका रामोसले यो सिजनको अन्त्यसँगै क्लब छाड्ने सम्भावना बढेको स्पेनिस मिडियाले जनाएका छन् ।
हाल उमेरले ३४ वर्ष पुगेका रामोसको रियलसँगको सम्झौता यसै सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदैछ । तर, हालसम्म रामोस र क्लबबीच नयाँ सम्झौताका लागि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । ‘मार्का’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार रियल रामोससँग थप एक सिजन सम्झौता गर्न तयार छ । तर, रामोस कम्तीमा दुई सिजनको सम्झौता चाहन्छन् ।
टोलीको रक्षापंक्तिका खम्बा रामोस एक सिजनको मात्रै नयाँ सम्झौता स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । उनी कम्तीमा अझै दुई सिजनको थप सम्झौता चाहन्छन् । तर, त्यसका लागि क्लब तयार नभए उनी नयाँ क्लबमा फ्री ट्रान्सफरमा जान तयार देखिएका छन् । यो बताइन्छ कि, रामोसको बढ्दो उमेरसँगै रियल उनीसँग लामो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । पछिल्लो समय रामोसले क्लब छाड्ने सम्भावना बढेसँगै क्लबले जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका अस्ट्रियन सेन्टर डिफेन्डर डेभिड अलबालाई रामोसको स्थानमा भित्र्याउन सक्रिय रहेको चर्चा छ ।
यदि क्लबले आफूले भनेअनुसार दुई सिजनको सम्झौताका लागि तयार नभए रामोस स्पेन छाडेर युरोपकै अन्य क्लबमा जान सक्छन् । र, उनी अहिले नै आफ्ना लागि ठूला क्लबका लागि प्रस्ताव सुन्न तयार देखिएका छन् । रामोसका लागि फ्रेन्च क्लब पिएसजीले मुख्य चासो देखाइरहेको छ । यदि क्लबसँग नयाँ सम्झौता नबन्ने स्थिति आए रामोसको नयाँ गन्तव्य पिएसजी हुने सरुवा बजारमा चर्चा छ । त्यहाँ अहिले नयाँ प्रशिक्षकमा इंग्लिस क्लब टोटनह्यामका पूर्वप्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो नियुक्त भएका छन् ।
सिजन २००५–०६ देखि रियलबाट खेल्दै आएका रामोस युरोपियन टप–५ लिगमै सर्वाधिक गोल गर्ने डिफेन्डर हुन् । सेन्टर डिफेन्डर भए पनि उनले प्रशस्तै गोल गरेका छन् । उनले हालसम्म रिययका लागि कूल ६६६ खेल खेल्दै १०० गोल गरेका छन् । रियलका लागि उनले ५ ला लिगासहित चार च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका छन् ।
प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान पनि रामोसलाई क्लबकै राख्न चाहन्छन । रिपोर्टअनुसार केही समयअघि जिदानले क्लबलाई लुका मोड्रिक र रामोससँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएका थिए । जसमा मोड्रिकसँग नयाँ सम्झौता भइसकेको छ भने रामोससँग हालसम्म सम्झौता भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति २१ पुष २०७७, मंगलवार १०:३३